Nosy Malagasy: Nanaitra ny Loholon’i Madagasikara haneho hevitra ireo antoko politika
jeudi, 10 septembre 2020 21:19
Nihaona tamin’ny Filoha Rivo Rakotovao teo amin’ny Lapan’ny Antenimierandoholona, ny alarobia 09 septambra 2020, ny antoko Otrikafo, ny Komba, ny Antoko Politika Madio, ny ALEFA, ny Front de Libération Nationale, ny SOLIDE ary ny olom-pirenena tsotra.
Nitondra ireo soso-kevitra entina hanairana ny Loholon’i Madagasikara haneho hevitra manoloana ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Loholona frantsay mikasika ireo Nosy Malagasy izy ireo.
Ao anatin’izany ny hametrahana ho lahadinika maika amin’ny fivorian’ny Antenimierandoholona malagasy ny valin’io fanapahan-kevitra io, ny tokony hananganana vaomiera manokana marolafy afaka mijoro sy ho sarotiny mafy amin’ireo Nosy ireo, ary ny tokony hanatevenana ny fangatahana fanohanana avy amin’ny firenena na vondrom-paritra ivelan’ny fanjakana malagasy.
Nanambara ny Filohan’ny Antenimierandoholona fa amin’ny maha mpanao politika sy mpandinika ny fiaraha-monina ny Loholon’i Madagasikara, dia mifandray sy mihaino ireo lafin-kery rehetra izy ireo mba ahatongavana amin’ny tanjona iraisana.
Nampanantena izy fa hitondra izany eo anivon’ireo mpikambana rehetra, ary handinika izany amin’ny fivoriana ara-potoana faharoa.